Igbo, Romans, Lesson 007 -- Paul’s Longstanding Desire to Visit Rome (Romans 1:8-15) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 007 (Paul’s Desire to Visit Rome)
b) Ochicho anya Pol nke ileta Rom (Ndi Rom 1:8-15)
NDI ROM 1:13-15
13 Ugbu a, achọghị m ka unu ghara ịma, ụmụnna m, na m na-ezubekarị ịbịakwute unu (ma ọ na-egbochi m ruo ugbu a), ka m wee nwee mkpụrụ n’etiti unu, dịkwa ka ọ dị n’etiti ndị mba ọzọ. Eji m ụgwọ ma ndị Grik ma ndị nkịtị, ma ndị maara ihe ma ndị amaghị ihe. 15 Ya mere, dịka kwa nke dị n’ime m, adị m njikere ikwusara unu ndị nọ na Rom ozi-ọma.
N’akwụkwọ ozi a, Pol mepere obi ya nye ndị ụka Rom. Ọ na-agwa ha ugboro ole o bu n’obi ma na-eme atụmatụ ileta ha, mana na Chineke egbochila atụmatụ ya niile. Onye ozi uku kwesiri ibu ụzọ mụta n’oge na echiche Chineke dị iche na nke ya, na ụzọ Chukwu dị elu karịa nke ya dịka eluigwe dị elu karịa ụwa. Mmụọ nke Kraist gbochiri ya imezu ebumnuche ya, ọbụlagodi na ha dị ka o bara uru, dị mma ma dị nsọ. Ọzọkwa, mgbe ohere ije dị n'anya ya, Chineke gbochiri ya.
Agbanyeghị, Pọl tinyere n’obi ya na ọ ga-ekwusara ụwa ozi. Ọ chọrọ, site na ndụ ya, ịtọlite alaeze nke Chineke na Rome na mba ndị ọzọ. Ocheghi ileghari ndi mmadu di iche iche, kama o bu n’obi idozi mba nile, n’ihi na o doro ya anya na ngozi nke Kraist, nke n’aruru oru n’ime ya. Ọ hụwo Onye nwe ya dị ebube, ma nwee ntụkwasị obi na Eze nke ndị eze nwe ụwa niile nakwa na ọ ga-enwerịrị mmeri ya.
Onye ozi nke mba hụrụ onwe ya dịka onye ji mmadụ niile ụgwọ, ọ bụghị n'ihi na ọ napụrụ ego n'aka ha, kama ọ bụ maka na Chukwu nyefere ya ikike ya. Ya mere o ji ụgwọ inye ndị niile a họpụtara ahọpụta n'ime Kraịst ike na ikike dị otú a. N’eziokwu, anyị niile bi taa site n’onyinye Chineke nyere Pọl, onye ji akwụkwọ ozi ya mee ka anyị bụrụ ndị ike ya. N’okpuru nke a, anyị ghọrọ ndị ji gị ụgwọ, ebe ị bụ ụgwọ ndị niile gbara gị gburugburu, n’ihi na mmụọ nke na-arụ ọrụ n’ime anyị abụghị nke anyị, kama ọ dị njikere ibi n’ime obi ọtụtụ ndị.
Pọl rụrụ ọrụ n'etiti klas nke ndị Grik gụrụ akwụkwọ, Onyenwe anyị guzobere ọrụ ya site na adịghị ike Pol. O hiwere ulo uka na akuku nile nke Oke Osimiri Mediterranean, bu ndi na-asa agwaetiti Gris. Ekem ke ini ekewetde leta emi, enye ama aduak ndinam utom ke otu Mme Barbari ke France, Spain, ye Germany. Ọ chọsiri ike ikwusara onye ọ bụla ozi ọma na Chineke nwere Ọkpara nke gbapụtara anyị n'obe. N’ime ekworo siri ike ya na onye siri ike, Onye-ozi nke Mba dị ka rọketi nke akwadebere ka eweghara ya. Ọ natara na o nwere ike ịkparịta ụka. N'ihi ihunanya o nwere n’ebe ndi Ocha no, o choro inweta ndi Rom ka ha soro ya mee ma soro ya zie ndi mba ozo. N'ihi ya, ọ chọrọ ikwusara ndị kwere ekwe nọ na Rom ozi ọma, na ha onwe ha, wee bụrụ ndị nkwusa; n'ihi na inweta nzoputa mebere onye ahu a zoputara ibu ọrụ nke iburu ndị ozo ozi nzọpụta. Pol ama enịm Rom ke iso esie nte adaha ye editọn̄ọ ukwọrọikọ nnọ ofụri ererimbot.
Ma otodi, Chineke zara ekpere nke onyeozi ya n'uzo ozo. O zigaghị ndị nnọchi anya ya na Rom ozugbo, kama nke ahụ, o weghachiri ya mbụ na Jerusalem ka e jide ya ma tụọ ya mkpọrọ. Mgbe ogologo afọ na ihe mgbu gasịrị, Pọl bịarutere n'isi obodo ahụ, tụọ ya mkpọrọ, ya na ohu Kraịst. N'agbanyeghị nke ahụ, ike Chineke esighi n'ime ya. Ya onwe ya kwa, n’agbanke ya, kwusaara uwa niile ozi n’akwukwo ozi ya Rom, nke na - ekwusara ndi mmadu na mba nile ozi rue taa.
Ugbu a, anyi bu umu umu ndi anaghi ekwe ego ahu Pọl bu n’obi ikwusara ya ozi, were were obi oma gbasa ozi oma nke Chineke dika enyereworu Pol aka ime n’oge ahu. Eleghi anya o tinyeghi uche Pol n’obi na akwukwo ozi ya na Rom bu mmezu nke ochicho ya ikwusara ndi mba ozo ozi oma. Onweghi akwukwo ozo, ewezuga ozioma nke Jon, gbanwere uwa dika akwukwo ozi a, nke edere otutu ekpere na uzu nke Mụọ.
EKPERE: O Onyenweanyi, Gi onwe gi bu Eze, I n’eduzi ndi oru gi dika uche Gi si di. Gbaghara anyị ma ọ bụrụ na anyị bu n’uche ihe ọ bụla, nke na-ekwekọghị n’uche gị. Dobe anyị kpam kpam na nduzi gị ka anyị wee ghara ịgbachapụ atụmatụ nke ịhụnanya gị, kama irube isi n'iwu mmụọ gị, ma jiri ọ gladụ mezuo uche gị, ọbụlagodi na ha emegideghị echiche anyị. Jehova, ụzọ gị dị nsọ, anyị nyefere anyị n'aka ịkwado ihe gị. Daalụ maka ịhapụghị ka anyị daa site na ebere gị.
Olee, ugboro ole ka Chineke gbochiri Pọl imezu nzube ya?
Page last modified on January 25, 2021, at 08:07 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)